Hamsters - यो अविश्वसनीय, प्यारा हास्यास्पद र धेरै मनपर्ने मान्छे जनावर हो। आज, एक पाल्तु जनावर रूपमा यी प्राणीहरू लगभग हरेक घर वा अपार्टमेन्ट पाउन सकिन्छ। तपाईं एउटा सानो जनावर एक स्टोरमा मा, अखबार मा विज्ञापन खरिद गर्न सक्नुहुन्छ, पढ्न, वा जो hamsters नस्ल एक मित्र, मार्फत। सबै भन्दा राम्रो पाल्तु जनावर आफैलाई चयन गर्नुहोस्। उहाँले कुनै पनि ठूलो क्षेत्र, कुनै विशेष हेरविचार, वा विशेष आहार आवश्यकता छैन। तालिका मा एक लोखर्के पिंजरे लागि ठाउँ आवंटित गर्न र तिनीहरूले फल, तरकारी, porridge र थप खान किनभने शाब्दिक, तालिका बन्द खुवाउन यो Suffice। लोखर्के, परिवारको पूर्ण सदस्य, कुनै संदेह छैन, हुनुपर्छ यसको आफ्नै नाम। त्यसैले तपाईं hamsters लागि नाम कसरी चयन गर्छन्?
एक पाल्तु जनावर चयन गर्दा, तपाईं शायद उहाँले कठिनाइहरू समयमा तपाईं आनन्द ल्याउने भन्ने तथ्यलाई मा गणना। तपाईं सबै राम्रो छ भनेर देख्ने किनकी, पशु को स्वतन्त्रित जीवन हेर्दै र यो सत्य हो, र यदि त्यहाँ थप सुविधा यो मीठो प्राणी दिन भन्दा सुखद कुरा हो। एक कृंसम्म खरीद यसको लागि एउटा नाम चयन गर्नुपर्छ, र यो धेरै भन्दा धेरै hamsters लागि नाम रूपमा, सबै भन्दा कठिन चरण शायद हुँदा। त्यसैले, धेरै खरीदारों लागि उपनाम लायकको एक विकल्प एकदम जटिल छ।
त्यस अवस्थामा मा, लोखर्के बच्चा लागि वरदान हो भने नाम को विकल्प उहाँलाई, सुम्पिन्छु। यो बच्चा आफ्नो कल्पना व्यक्त गर्न र पूर्ण आफ्नो पाल्तु जनावर लागि उपयुक्त नाम चयन सामना सम्भावना छ। तपाईं जस्तै कृंसम्म कल, मुख्य कुरा - memorizing जब यो सजिलो छ। तपाईंको कृंसम्म एक रातो कोट रंग छ भने, यो उपयुक्त नाम अदरक, यो निरन्तर सुतेको छ भने, तपाईंले यो केटी हो भने, Sandman वा Sonya उहाँलाई कल गर्न सकिन्छ।
लोखर्के महान परिवारको लागि यो यस्तो डोरिस, रोजर, वा दानियल रूपमा थप जटिल र नाम को योग्य, चयन गर्न सम्भव छ। यो सबै आफ्नो कल्पना मा निर्भर गर्दछ।
को लोखर्के भने - केटी, यो यसको हार्दिक, बाक्लो र नियमित खुवाउनुभयो महत्त्वपूर्ण छ, घर सफा थियो, र बिछ्यौना न्यानो थियो। तपाईं सबै केटी पालना हो भने खुसीसाथ कुनै पनि उपनाम प्रतिक्रिया। तसर्थ, एउटा नाम तपाईंलाई रुचि कि चयन गर्नुहोस्। उदाहरणका लागि, यदि homyachiha पोटिलो र मांसल चमक आँखा, उनको सिद्ध नाम भव्य संग। को पाहुनाको सत्कार गर्ने स्त्री homyachihi भने - मीठा किशोरीले, त्यो मनका को नाम प्रेम छौँ। यो एक हास्यास्पद diminutive डेरिवेटिव छ र हास्यास्पद र मायालु सुनिन्छ।
Homachku workaholic दृष्टिकोण माया नाम। को मौरी-plodder कार्टून एउटा analogy। तपाईंको homyachiha खान प्रेम गर्नुहुन्छ र भएको चिउँडो तीन भने, यो Georgette सकिन्छ। लगातार पिंजरे ढोका खोल्न र बाहिर चलाउन प्रयासरत जो चलाक, उपनाम बाँदर फिट। सामान्य मा, hamsters-बालिका लागि नाम धेरै विविध छन्, हामी मात्र आवश्यक पशु को प्रकृति संग आफ्नो अनुकूल विचार गर्नुहोस्।
लोखर्के-केटा को लागि सामान्यतया यसको रंग वर्णन नाम रोज्नुहोस्। आफ्नो पाल्तु जनावर खैरो छ भने, यो यस्तो ग्रे र धुवाँ साथै नाम जानेछ। पीच, फक्स, मन्डारिन, चक वा खूबानी - अदुवा कृंसम्म लागि। कालो लोखर्के कल, उदाहरणको लागि, Chernish वा कालो र सेतो - Marshmallow, Snowball वा Sundae। को लोखर्के एकदम पोटिलो छ भने, यो उपयुक्त नाम Pupsik, डोनट वा Pukhlikov छ।
जनावर धेरै फ्लफी छ भने, यो तुर्क, फ्लफी वा फ्लफी कल। यस्तो क्लिंटन, सम्राट्लाई, Manson, वाटसन, वा चर्चिल रूपमा hamsters सिद्ध सेलिब्रिटी नाम लागि नाम रूपमा। मानव नाम बारे मा भूल छैन, कहिलेकाहीं यी साना जनावर उदाहरणका Borya, Senka, kesha, Yasha, Fedka, Shary र यति मा लागि, पुरुष नाम छोटो धेरै उपयुक्त हो।
किनभने तपाईं केहि संग आउन सक्छ hamsters-केटाहरू लागि नाम, कल्पना मालिक निर्भर!
यी पशुहरू उत्कृष्ट सुनुवाइ हुनाले, तिनीहरूले पनि सपनामा, यसको आफ्नै उपनाम प्रतिक्रिया हुनेछ। hamsters लागि नाम सरल र थप मूल दुवै हुन सक्छ। तपाईंलाई एउटा विशेष तरिकामा एक पटक आफ्नो पाल्तु जनावर नाम निर्णय भने, तपाईं निन्दा छैन।
सानो जलजीवालय लागि माछा: चयन गर्न कसरी
Icebreaker "नेता": सुविधा र फोटो
अब्खाजिया मा आराम। त्यसैले चाहे त्यो रूपमा सामान्यतः विश्वास छ, बजेट छ?
"Akvabron": समीक्षा। "Akvabron" जुत्ता: आवेदन र प्रभावकारिता को सुविधाहरू
को Polovtsy व्लादिमीर Monomakh को हार। को Cumans हुन्
एड्स लागि उपचार धेरै जीवन बचाउन हुनेछ
धार्मिक जन Bearers: जन्मदिन पार्टी, प्रतिमा, रोचक तथ्य